I-River View Guest House, Imbobo Yokudoba
Ikamelo e-i-resort ibungazwe ngu-Bill
Ipharadesi labadobi! Nethezeka e-The Fishing Hole njengoba amagagasi engena ngasosebeni lomfula i-Illinois. Chitha usuku lwakho emphemeni noma wakhe umlilo kusihlwa. Sakaza ulayini wakho futhi udlale ngempelasonto enhle kakhulu!
Sinikeza iphakethe leRaging Rivers Water Park elihlanganisa amathikithi esaphulelo okuya epaki. Sicela usithinte ukuze usebenzise lesi sivumelwano sasehlobo!
Lesi sakhiwo sangaphambili somfula sinikeza umbono omangalisayo kuwo wonke ama-suite! Amadekhi amakhulu azungeze isakhiwo akhokhela ukuphuma nokushona kwelanga okumangalisayo ukuze ujabulele njengoba uphuza inkomishi yakho yekhofi noma ingilazi yewayini. Igceke elikhulu elingemuva elifakwe amatafula epikiniki, izoso esoso kanye nomgodi womlilo lilungele ukuhlangana komndeni nabangane. Uma ufuna ukuzivocavoca, kukhona ukufinyelela okulula endleleni yebhayisikili.
Zithokozise ngokuhlala kwelinye lamagumbi ayisithupha ahlotshiswe ngawodwana. Wonke ama-suites anekhishi elincane, Ibhavu eligcwele, Igumbi lokuhlala elinosofa osayizi wendlovukazi kanye negumbi lokulala elinombhede wendlovukazi. Ikhishi lihlanganisa isiqandisi, isitofu, usinki, i-microwave, izitsha nezitsha zokupheka, ibhodwe lekhofi kanye ne-toaster. Amadekhi aseduze afakwe itafula nezihlalo zokudlela ze-alfresco! I-Lounge ephakathi nendawo ilungele ukuhlangana ngenkathi ulinde abangani noma umndeni. Iphinde ibe nesikhungo solwazi sezindawo ezikhangayo. Wonke amagumbi awabhemi futhi awafuyi.